Waa si rasmi ah uga bilowday hoolka xarunta golaha shacabka Puntland khudbadihii musharaxiinta afhayeenka baarlamaanka Puntland – STAR FM SOMALIA
Waa si rasmi ah uga bilowday hoolka xarunta golaha shacabka Puntland khudbadihii musharaxiinta afhayeenka baarlamaanka Puntland oo ay u sharaxan yihiin sadax musharax oo kala ah xildhibaan Cabdkixakiin Xaaji Maxamed Dhoob-daareed xildhibaan Axmed Cali Xaashi iyo xildhibaan Siciid Cabdi Samatar Surcad .
Xildhibaan musharax Axmed Cali Xaashi ayaa bilaabay khudbada waxaana uu ku dheeraaday taariikh iyo aqoonta uu u leeyahay shaqada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo waxqabadkiisi mudii uu ahaa afhayeenka golaha wakiilada Puntkand waqtigii madaxweyne Cadde Muude .
Axmed Cali Xaashi ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka in ay khibradiisa uga faaideeyaan golaha shacabka Puntland oo ay u doortaan afhayeenka baarlamaanka Puntland.
Xildhibaan Cabdixakiin Dhoobo-daareed ayaa isna soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaynaysa isagoo ugu horayn sheegay in uu ka miro dhalin doono aragtida fog ee golaha wakiilada Puntland hadii xilkan loo doorto .
sidoo kale isna waxaa hadda khudabada dhameeyay xildhibaan Surcad oo ka sheekeeyay waxqabadkiisa hadii loo dorto gudoomiayaha golaha shacabka Puntland .
Waxaa dhawaan la guda gali doona qaybinta waraaqadaha codaynta gudoomiyaha golaha shacabka iyadoo haatan loo diyaar garoobayo codaynta .